Fitsaboana Proton ho an'ny fitsaboana homamiadana Prostate - Proton any California
Fomba fitsaboana ny homamiadana Proton Therapy
Miady amin'ny homamiadana Prostate miaraka amin'ny famaranana mitovy amin'ny Laser
Talen'ny California Protons, Carl Rossi, MD, dia ekena eran-tany mba hitsaboana manokana ny marary homamiadana maherin'ny 10,000 mandritra ny 26 taona lasa izay - mihoatra ny mpitsabo hafa eto amin'izao tontolo izao.
Raha oharina amin'ny fitsaboana fitsaboana pasifika pasifika taloha kokoa, ny teknolojia fanodinam-bolo avy amin'ny pensilihazo dia manome ny fitsaboana ny proton ho an'ny homamiadana prostate miaraka amina fametrahana tsy miova ary ny fikarakarana fatratra. Izy io dia mamela ny mpitsabo antsika hanafika fivontosan'ny fivontosan'ny viriosy, amin'ny alàlan'ny sosona, miaraka amin'ny taratra avo be ary manamaivana ny fandehanana any amin'ireo faritra tsy voakasik'izany. Zava-dehibe izany ho an'ny marary homamiadana prostate izay mety miatrika ny fihanaky ny areti-mifindra, mihena ny haavon'ny testosterone, ny olana urinary sy ny rectal ary ny gastrointestinal vokatry ny taratra. Ny fampihenana ny poizina mifandraika amin'ny taratra dia mampitombo ihany koa ny fahafahan'ny marary mameno ny fitsaboana amin'ny fampiatoana na fanemorana kely kokoa.
Fomba fitsaboana ny Proton ho an'ny prostate
Ny homamiadana prostateam-boalohany
Ny homamiadana eo amin'ny eo an-toerana (Stage III sy IV)
Ny tranga sasany amin'ny homamiadana metastatic
Arovy ny sela marefo marefo, ny tadinao, ny felany ary ny tsipika
Mampihena ny voka-dratsiny, anisan'izany ny fatran'ny testosterone ambany, ny fihary ary ny aretin-kozatra ary ny aretin'ny gastrointestinal
SpaceOAR® Hydrogel - Mitsivalana organs tandindomin-doza
Ao anatin'ny ezaka hanamaivanana ny taratra tsy ilaina, ny voka-dratsin'ny faniriana ary ny ratra mety hitranga mandritra ny fivontosana mandritra ny fitsaboana ny homamiadana homamiadana sy toe-javatra manokana, omen'ireo marary ny hydrogel. California Protons izao dia manolotra ity fomba fitrandrahana kely ity mba hindrana ny hydrogel ao amin'ny serananay. Indray mandeha amin'ny toerana izany, mazàna dia tsy mahatsapa ary miasa tahaka ny spacer 1.3cm1 manosika ny tenda hiala amin'ny prostate. Mijanona eo amin'ny toerany ny spacer mandritra ny telo volana alohan'ny handraisany tanteraka sy manala ny masonao.
Ny fahombiazan'ny fahombiazana2
Soa azo avy amin'ny fitsaboana Proton ho an'ny homamiadana Prostate
Ny teknôlôjian'ny fandinihana ny vatan-tsamainty dia mifehy mivantana ny proton mba hametrahana ny tampon-tranon'i Bragg - ny fotoana nametrahany ny angovo faran'izy ireo indrindra - mivantana ao amin'ny fivontosan'ny prostate. Izany dia ahafahantsika mikarakara ireo fivontosana mihanaka be kokoa sy manova ny fatra ao anaty fivontosana.
Ny fitsaboana mahery vaika dia manome alalana ny dokotera hanolotra taratra doka avo be ho an'ny sela fivontosan'ny homamiadana ary hampihena ny doka amin'ny sela salama sy taova lehibe. Amin'ny tranga sasany, io dia naseho fa manome taham-pahasitranana avo kokoa noho ny fitsaboana taratra X-ray na dia amin'ny toe-javatra sarotra sasany aza. Tamin'ny fandinihana iray, 97 isanjaton'ny 4,000 marary fitsaboana proton dia tsy mbola niverimberina; maro amin'ireo marary tsy voan'ny homamiadana no nahavita fitsaboana hatramin'ny 10 taona lasa izay.3
Ny fihenan'ny fihenan'ny homamiadan'ny prostaty ary tsy misy fiatraikany amin'ny tahan'ny testosterone. Ny fanadihadiana 2013 dia tsy nahita fiovana lehibe teo amin'ny tahan'ny testosterone amin'ny mararin'ny homamiadan'ny prostaty ambany sy antonony.4 Ny fandinihana iray hafa dia nahitana taratry ny taratra ambany noho ny tadiny sy ny tatavia miaraka amin'ny fitsaboana proton kokoa noho ny taratra taratra X, izay naseho fa mampihena ny mety hitrangan'ny olana amin'ny urin sy ny tsinay.5
Nohafohy ny fotoana fitsaboana ny homamiadan'ny prostaty, ny fatra ambony, ny vidiny ambany ary ny fanakorontanana bebe kokoa amin'ny ain'ny marary amin'ny fitsaboana hypofractionation. Fitsapana maro tany Etazonia sy Angletera no nampiseho fa ny fihenan'ny hypo (4 hatramin'ny 6 herinandro fitsaboana) dia mandaitra hatramin'ny 8 ka hatramin'ny 9 herinandro fa tsy misy poizina ho an'ny sela salama intsony.
Tsy toy ny teknolojia taloha, ny drafi-pitsaboana dia azo ampidirina ao anaty solosaina ary vita ao anatin'ny iray minitra. Ny fitsaboana ny homamiadan'ny prostate dia tsy mahasosotra ary mora ihany koa ahafahan'ny marary miverina haingana kokoa amin'ny asany isan'andro.
Miatrika fivontosan'ny kansera
Ny sehatra ny homamiadan'ny prostate dia iray amin'ireo antony lehibe indrindra amin'ny fisafidianana fitsaboana. Miankina amin'ny sehatra, ny fitsaboana mitambatra, ny prostatectomy radial, brachytherapy, fitsaboana hormonina, fitsaboana simika ary fitsaboana radiation. Ny safidy fitsaboana koa dia voakasiky ny karazan'aretin'ny homamiadana, taona, ny fahasalamana ankapobeny ary ny filan'ny tena manokana.
Amin'ny ambaratonga voalohany, ny homamiadana prostate dia hita ao amin'ny glande prostate ihany. Ny fitsaboana amin'ny taratra ho an'ny homamiadan'ny prostaty dia matetika no soso-kevitra mba hampihena ny mety hisian'ny kansera miparitaka, indrindra ho an'ireo manana skalise Gleason avo lenta sy PSA.
Amin'ny dingana II, ny homamiadana prostate dia mandroso noho ny sehatra I, saingy tsy niely ivelan'ny prostate. Ny dingana II dia mizara ho fizarana IIA (antsasaky ny latsaka kely kokoa) ary IIB (antsasaky ny litatra iray). Amin'izao vanim-potoana amin'ny homamiadana prostate izao, ny fitsaboana sy ny fitsaboana amin'ny radiation dia safidy fitsaboana. Ny fitsaboana aretin-tranonjaza dia mety mbola azo atoroina aorian'ny fandidiana mba hampihenana bebe kokoa ny mety hisehoan'ny homamiadana na miverina.
Ny kansera prostaty Stage III dia niparitaka tany ivelan'ny sosona ivelan'ny prostate ary mety niparitaka tamin'ny vesatra seminal. Ny fandidiana sy ny fitsaboana aretin-tsaina miaraka amin'ny fitsaboana hormonal dia safidy fitsaboana amin'ny fitsaboana amin'ny dingana amin'ny homamiadana prostate. Ny fitsaboana aretin-jaza dia mety mbola ilaina aorian'ny fandidiana mba hanomezana fanaraha-maso fanampiny homamiadana eo an-toerana sy lavitra.
Ny kansera prostaty dingana IV dia mety miparitaka any ambadiky ny vesatra seminal mankany amin'ny taolana na taova eo akaikiny, toy ny lalan-dra, tadiny na lymph node. Amin'ity dingana ity, ny fitsaboana amin'ny vatana manontolo miaraka amin'ny fitsaboana hormonina na fitsaboana aretin-tsaina no fototry ny fitsaboana. Ny fitsaboana eo an-toerana miaraka amin'ny fandidiana na fitsaboana fitsaboana taratra dia mety hilaina mba hifehezana ny soritr'aretina. Ny fitsaboana ny taratra Protonon dia azo ampiasaina amin'ny homamiadana prostateeurs na tara amin'ny ambaratonga hampihenana ny fivontosana na hitantana fanaintainana.
Ny homamiadana miverimberina
Ny fitsaboana fitsaboana Proton ho an'ny homamiadana prostate any California Protons cancer Therapy Centre any San Diego dia mety hanome valiny mitovy amin'ny taratra X-ray manara-penitra, raha mampihena ny vokatra maharitra sy mampidi-doza amin'ny fiainana toy ny fivontosana erectile, mampihena ny haavon'ny testosterone, urinary ary rectal olana, ary aretin'ny gastrointestinal noho ny fihanaky ny taratra amin'ny aretim-bavony, ny tsinay ary ny fipoahana. Izy io koa dia manome ny mety hisian'ny fihenan-drà mety ho an'ny homamiadana faharoa any aoriana any amin'ny fiainana noho ny fihenan'ny tara-pahazavana amin'ny sela sy taova mahasalama.
Na izany aza, ny fitsaboana homamiadana rehetra dia manana tombony sy fatiantoka. Aza adino ny miresaka momba ny mety ho loza rehetra, ary koa ny safidy fitsaboana ho an'ny homamiadan'ny prostate, miaraka amin'ny onkolojia na urologist anao.
Fikarohana fikarohana manohana ny fitsaboana ny proton ho an'ny homamiadana Prostate
1 Mitohy ny tombony azo amin'ny fisarahana eo amin'ny lafiny ara-teknika amin'ny fitsaboana aretin'andoha: vokatra farany
2 Hydrogel Spacer Prospective Multicenter azo raisina an-tànana ny fanandramana pivotal: Fitsapana Dosimetika sy klinika momba ny fampiharana ara-pahalalana tsy miova amin'ny lehilahy dia manala sary sary manaparitaka an-tserasera
3 97 isan-jaton'ny marary homamiadana prostate izay voatsabo amin'ny fitsaboana proton dia tsy niverimberina
4 Hypofractionated passive radiotherapy proton radiotherapy ho an'ny homamiadana ambany sy manelanelana-risika dia tsy misy ifandraisany amin'ny famoronana testosterone taorian'ny fitsaboana
5 Therapy Beam Therapy ho an'ny homamiadan'ny prostate homamiadana 101: ny fototra, ny fifanoherana ary ny zava-misy
Ny kalitaon'ny fiainana sy ny poizina avy amin'ny fampielezana tampoka sy ny aretin-jaza proton beam miady amin'ny homamiadana prostate eo an-toerana
Fampitahana fanafody fatra-panafody fitsaboana avo lenta amin'ny fitsaboana avo lenta amin'ny adenocarcinoma ara-pitsaboana arak'aretina
Fampitahana radioteran'ny prototaina sy brachytherapy amin'ny homamiadana prostate eo an-toerana: famakafakana fizarana
Fampitandremana ny fatra amin'ny fitsaboana ny proton ary ny radioteran'ny fanatanjahana ho an'ny homamiadana prostate
Vokany tany am-piandohana ho an'ny fitsapana telo ho an'ny fitsaboana proton mpitarika sary ho an'ny homamiadana prostate
Ny fiasan'ny erectile, ny tsy fahatomombanana ary ny kalitaon'ny fiainana hafa aorian'ny fitsaboana ny proton ho an'ny homamiadan'ny prostaty amin'ny lehilahy 60 taona sy ny tanora
Vokatry ny dimy taona avy amin'ny fizahana Prospective 3 ho an'ny fitsaboana ho an'ny homamiadana Prostate
Vokatry ny fiainana maharitra ela taorian'ny protamora beam monotherapy ho an'ny homamiadana prostate eo an-toerana
Fitantanana ny fahasarotana ny fitsaboana ny homamiadana
Ny valin'ny faharetan'ny marary maharitra efa ela taorian'ny fampihenan-tsolika sy foton-tsarimihetsika mitambatra avo dia avo ho an'ny homamiadana voalohany
Vokatry ny fihazakazahana sy ny poizin-kery dimy taona taorian'ny fitsaboana proton ho an'ny homamiadana prostate ambany sy antonony: vokatry ny fitsapana roa mety hitranga